Date : 25-06-2022 - 26-06-2022
Time : 10:00 am :7:00 pm
Sawadee ka! ⁣ Looking foraplace for weekend outing? Try Thailand Festival at Myanmar Plaza! Starting on June 25th, the event will bring unique Thai products of fashion, cosmetics, and YES, food! The special part of the program will feature Cultural Show performance of Thailand as well. The event will take place at Myanmar [...]
Date : 11-06-2022 - 12-06-2022
Time : 2:00 pm :6:00 pm
Myanmar Plaza Eating Contest
၂၄နာရီမှာ ၂၅နာရီလောက်က အစားအကြောင်းပဲတွေးတဲ့သူတွေအတွက် Challenge လေးတစ်ခုလာပြီနော်။ ဒီတစ်ပတ် စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ မြန်မာပလာဇာ EATING CONTEST ကိုဝင်ပြိုင်ရင်း သတ်မှတ်ချိန်အတွင်းအမြန်ဆုံးစားနိုင်တဲ့သူတွေက ဆုငွေ(၁)သိန်းထိရယူနိုင်မှာပါ။ တစ်ယောက်ကို တစ် round ပဲပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး တစ် round ကို မိနစ်ပိုင်းပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Eating Contest မှာပြိုင်ပွဲဝင်အယောက် (၃၀) ပဲသတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ဖို့ အောက်ကလင့်ခ်လေးမှာ အမြန်စာရင်းပေးဖို့လိုမယ်နော်။ စာရင်းပေးနောက်ကျသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အပျော်တန်းပြိုင်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီနေ့တွေမှာ လာရောက်ယှဥ်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရတဲ့သူတွေကလဲ ဆုငွေ(၅)သောင်းကိုဆွတ်ခူးရရှိနိုင်မှာပါ။ ခုထဲက အမြန်ဆုံးစာရင်းပေးပြီး ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေနဲ့ ပြိုင်ရမလဲစိတ်ကူးယဥ်လိုက်ရအောင်။ စာရင်းပေးရန် > https://bit.ly/3mlV5u4 ပြိုင်ပွဲအချိန် > 2PM-6PM, June 11th, 12th , 2022 ပြိုင်ပွဲနေရာ > မြန်မာပလာဇာမြေညီထပ် ပရိုမိုးရှင်းဧရိယာ။ Attention [...]
Date : 03-06-2022 - 05-06-2022
Time : 9:00 am :5:00 pm
Monsoon Season Branded Shoes Sale
မိုးတွေလေတွေထဲခရီးသွားရတာ စိတ်မညစ်ရဖို့ ပေါ့ပါးခိုင်မာတဲ့ဖိနပ်လေးတစ်ရံရှိဖို့လိုပြီနော်။ မနက်ဖြန်မှာစတင်တော့မယ့် မြန်မာပလာဇာရဲ့ Monsoon Season Branded Shoe Sales မှာ အများဆုံး ၈၀% ထိလျှော့စျေးတွေနဲ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ ဒီ Monsoon Sales အစီအစဥ်က မြေညီထပ်ပရိုမိုးရှင်းဧရိယာမှာ ဇွန်လ(၃)ရက်နေ့ကနေ (၅)ရက်နေ့ထိရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Needashoe to accompany you in the wind and rain? Takeavisit to Myanmar Plaza’s Branded Shoe Sales and get UP TO 80% discount just in time for the Monsoon. The [...]
Date : 28-05-2022 - 29-05-2022
Time : 9:00 am :6:00 pm
Superhero, Anime, Gaming နဲ့ fandom မျိုးစုံက Character Costume တွေဝတ်ဆင်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကို “Myanmar Plaza Cosplay Contest” အစီအစဥ်မှ ဖိတ်ခေါ်နေပါပြီ။ မေလ(၂၈)နဲ့ (၂၉)မှာကျင်းပမယ့် Cosplay Contest မှာ “ကလေး cosplay” နဲ့ “ဝါသနာရှင် cosplay” ကဏ္ဍနှစ်ခုရှိပြီး မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Costume Design တွေနဲ့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး Cosplay Performance များကို Voting စနစ်နဲ့ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီး ငွေသားဆုတွေအဖြစ် Best-in-Show ဆု (ဝါသနာရှင်အဆင့်အတွက် သိန်း(၃၀)ကျပ်၊ ကလေးငယ်အဆင့်အတွက် (၁၀)သိန်းကျပ်) ဝါသနာရှင်အဆင့် Best Performance ဆု (အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး) - သိန်း(၂၀)ကျပ်စီ ကလေးငယ်အဆင့် Best [...]
Date : 29-04-2022 - 03-05-2022
Furniture & Electronic Sales
Modern. Stylish. Top-notch. Such are the qualities we will see on the products at Myanmar Plaza’s upcoming Electronics & Furniture Sales, along with UP TO 20% DISCOUNT. The event will take place at the ground floor promotion area from April 29th to May 3rd. ခေတ်မီလှပတဲ့ အိမ်သုံးပရိဘောဂတွေကို အထူးပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ ရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ မြန်မာပလာဇာရဲ့ Electronics & Furniture Sales ကို ဧပြီလ(၂၉)ရက်နေ့ကနေ [...]